Booliska oo baaraya imtixaan laga qaaday ciyaaryahan Luis Suarez | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Booliska oo baaraya imtixaan laga qaaday ciyaaryahan Luis Suarez
Barcelona’s Uruguayan forward Luis Suarez reacts during the Spanish Super Cup semi final between Barcelona and Atletico Madrid on January 9, 2020, at the King Abdullah Sport City in the Saudi Arabian port city of Jeddah. – The winner will face Real Madrid in the final on January 12. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)
Luis Suarez ayaa imtixaankan laga qaaday toddobaadkii lasoo dhaafay kaddib markii ay soo baxeen warar sheegayo in uu doonayo in uu ku biiro kooxda ka dhisan Talyaaniga ee Juventus.
Balse haatan wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid.
Shan kamid ah barayaasha jaamacadda ayaa haatan la baarayaa, mas’uuliyiinta waxay Talaadadii jaamacadda ka heleen dokumentiyada.
Xaaska Suarez waxay kasoo jeedaa Talyaaniga, sidaas darteed, wuxuu qaadan karaa dhalashada Talyaaniga balse ninkan 33 jirka waa in uu ka baasaa luqadda Talyaaniga oo imtixaan looga qaaday jaamacadda Perugia 17-kii bishan.
Suarez ayaa ku biiray kooxda Barcelona sanadkii 2014-kii, wuxuu xilli ciyaareedkiisa ugu horreeyay ka caawiyay kooxda inay ku guuleysto horyaalka Yurub, Copa del Rey iyo horyaalka Spain ee La Liga.
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa haatan shaacisay inay aqbashay in weeraryahankeeda Luis Suarez uu ku biiro kooxda ay ka wada dheelaan horyaalka La Liga-ha ee Atletico Madrid.
Suarez kuma uusan qanacsanayn in uu sii joogo kooxda Barcelona, ayadoo kooxduna ayba ku faraxsanayd in ay iska fasaxdo.
Laacibkaan u dhashay dalka Uruguay ayaa oggolaaday heshiis hoos loogu dhugay mushaarkiisii, kaddib markii uu ku guuldarraystay in uu ku biro kooxda Juventus ee Talyaaniga sababo la xiriira passport-kiisa.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Hanjabaad hawada loo mariyey
Next articleQarax xooggan oo ka dhacay Lubnaan iyo bakhaarkii hubka ee ururka Xisbullaahi oo gubtay
Madaxweyne Farmaaho oo ka hadlay Cideyntii Maanta ee mataalada Gobolka ...